बादलको प्रचण्डलाई चेतावनी : एकीकरणमा होस पुगोस् » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बादलको प्रचण्डलाई चेतावनी : एकीकरणमा होस पुगोस्
मन्त्रालयमा सचिव नियुक्त गर्दा एमालेकरण गरिएको आरोप
मंगलवार, चैत्र २७, २०७४ १३:५८ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । मन्त्रालयका सचिवको सरुवा तथा हेरफेरमा एमालेकरण गरिएको भन्दै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले भारत भ्रमणमा निस्कनु अघिल्लो दिन विभन्न मन्त्रालयका ३० जना सचिव हेरफेर गरेका थिए । यति ठूलो हेरफेरको जानकारीसमेत आफूले मिडियामार्फत पाउनु परेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल असन्तुष्ट बनेका छन् । उनी असन्तुष्ट बन्नुको यो मात्र कारण छैन देशभरको सूचना ल्याउने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत लगिएकोमा पनि गृहमन्त्री थापाको आपत्ति रहदै आएको छ । पछिल्लो समय विप्लव माओवादीसँग सम्बन्धित सूचना आउन छाडेपछि थापाको आक्रोस बढेको हो समाचार स्रोतले बतायो ।
सचिवको सरुवा तथा हेरफेरको अधिकार प्रधानमन्त्री र समान्य प्रशासनमन्त्रीलाई हुन्छ । अरु मन्त्रीहरूलाई यो अधिकार हुँदैन । यति जान्दाजान्दै पनि माओवादीका मन्त्रीहरूले आपत्ति प्रकट गर्नुको कारण अर्कै छ । पार्टी एकीकरण नभएसम्मका लागि यो गठबन्धन सरकार हो, प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी पार्टीको सहमति लिने परम्परा छ । सामान्यतः सम्बन्धित पार्टीको अध्यक्ष तथा सम्बन्धित पार्टीको नेतृत्व गरी सरकारमा सामेल भएको मन्त्रीसँग सहमति लिने परम्परा छ । बादल माओवादीको नेतृत्व गरी सरकारमा सामेल मन्त्री हुन् । सचिव सरुवाबारे मिडियाबाट जनाकारी पाउनासाथ गृहमन्त्री बादलले सुरुमा आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूको बैठक राखे । त्यसपछि आफू निकटका केही नेताहरूसँग पनि छलफल चलाए । बैठक तथा छलफलमा गृहमन्त्री बादलको भनाइ थियो– ‘एमाले पार्टी एकीकरणको पक्षमा होइन कि विलयको पक्षमा छ, हामीलाई सुराकी गर्न सचिव पठाइएको छ, अब हामीले कठोर कदम चल्नुको विकल्प छैन ।’ अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्डको सहमति लिएर पो एमाले उक्त निर्णय गरेको हो कि ? भन्ने निष्कर्षमा बैठक पुग्यो । गृहमन्त्री बादल तुरुन्त पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न पुगे । प्रचण्डले पनि सचिव सरुवाको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
मन्त्री थापा असन्तुष्ट बन्नुको यो मात्र कारण छैन देशभरको सूचना ल्याउने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत लगिएकोमा पनि गृहमन्त्री थापाको आपत्ति रहदै आएको छ । पछिल्लो समय विप्लव माओवादीसँग सम्बन्धित सूचना आउन छाडेपछि थापाको आक्रोस बढेको हो समाचार स्रोतले बतायो ।
एकातिर पार्टी एकीकरण घोषणा सभाको तयारी वैशाख ९ गतेका लागि तय भएको सर्कुलर पठाइएको छ भने अर्कातिर सचिव सरुवामा समेत माओवादीले भाग खोजिरहेको देखिएको छ । वैशाख ९ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा दुई लाख मान्छे उतारेर आमसभा गर्ने र त्यही आमसभामा पार्टी एकीकरण घोषणा गर्ने तयारी भएको दुवै पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन् । त्यो मिति आउन दुई साता पनि बाँकी छैन । तर यहीबीचमा माओवादीले सचिवको सरुवामा समेत भागबन्डा मिलेन भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुलाई रहस्यमय रूपमा लिइएको छ ।
विवादास्पद मुद्दामा सहमति भयो भनिए पनि के के विषयमा सहमति भयो ? भन्ने सन्दर्भमा माओवादी र एमालेका नेताबाट फरक फरक जानकारी सार्वजनिक भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी संगठनअन्तर्गतका केन्द्रदेखि स्थानीय निकायका कमिटीहरूमा एमालेको ७० र माओवादीको ३० प्रतिशत हुने गरी कुरा टुंगिसकेको बताएका छन् । साथै जनयुद्ध र बहुदलीय जनवादलाई अहिले थाती राख्ने, चुनाव चिन्ह सूर्य नै कायम राख्ने विषयमा सहमति भइसकेको जनाएका छन् । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने केन्द्रमा बराबरीको आधारमा र त्यसभन्दा तलका कमिटीमा संख्यात्मक आधारमा पदको मिलान गर्ने सहमति भएको जनाएका छन् । यसैगरी, जनयुद्धको उच्च सम्मान गर्ने र सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा अंकित चुनाव चिन्ह राख्ने सहमति भएको पनि प्रचण्डले जनाएका छन् ।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ एक अर्कामा निकै बाझिएका कारण पनि यी दुई पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रिया धेरै टाढिएको विश्लेषण गरिएको छ । माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले तरुणसँग भने– ‘एकीकरणमा ढिलाइ हुने मात्रै होइन, हाम्रो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावनासमेत देखिएको छ । विलयको शैलीमा एकीकरण गर्नुभन्दा ओली नेतृत्वको सत्ताबाट बाहिरिएर कांग्रेसको सहयोगमा मज्जाले पाँच वर्ष सत्ता चलाउँछौं ।’
PREVIOUS POST Previous post: बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिन सांसदको माग
NEXT POST Next post: अन्तत: दुवै प्रहरीको आईजीपी खनाल !
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र २७, २०७४ १३:५८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र २७, २०७४ १३:५८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र २७, २०७४ १३:५८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र २७, २०७४ १३:५८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र २७, २०७४ १३:५८